Global Voices teny Malagasy » Rosia : Ireo «tenin’ny taona 2016» (nasiam-panazavàna) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Janoary 2019 16:36 GMT 1	 · Mpanoratra Yulia Savitskaya Nandika (ru) i Анна Севастьянова, Miriam Palisson, Sylvia Aimée
Sokajy: Rosia, Fiteny, Hehy, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2016)
Tamin'ny faran'ny taona lasa teo, navoakan'ny onjam-peo iray tsy miankina “Dojd” ny “rakibolana  iray ho an'ny taona 2016″. Anisan'ireo teny tao anatin'izany ireto, ny sasantsasany dia mifandray amin'ireo zava-baovao manan-danja na ireo fomba koltoraly, ireo hafa miaraka aminà sary namboarina na ireo “hatsikana” ety anaty tambajotra sosialy. Tao anaty lahatsoratra iray, nanazava vitsivitsy tamin'ireny teny ireny ny “RuNet Echo” (lisitra feno ery amin'ny faran'ny lahatsoratra), saingy mipirina any ananona any ny sasantsasany.
Tamin'ny May 2016, navoakan'ny “Novaïa Gazeta” ny lahatsoratra iray , nosoratan'i Galina Moursaliéva momba ireo “andiam-pamono” ao anaty tambajotra sosialy «VKontakte ». Araka ny lazain-dRtoa Moursaliéva, ireo onjam-pamonoantena nataon'ny tanora dia vokatry ny hetsik'ireo vondrom-piarahamonina virtoaly sasantsasany fantatra amin'ny endriny mandreraka — indrindra fa ny fampiasàny sarinà trozona, izay manapaka hevitra ny hamono tena satria tsy te-hitombo ho lehibe. Ampangainy ireo mpitantana ireny vondrona ireny ho misintona ny tanora izay efa ao anaty rarintsaina rahateo no sady koa manosika azy ireny hamono tena amin'ny fanakànana an-dry zareo tsy ho ampy torimaso sy amin'ny fanoroana azy ny fomba hamaranany ny androm-piainany. Manoro hevitra ireo ray aman-dreny ihany koa anefa ry zareo mba hanaraka maso akaiky ny hetsika ataon'ny zanany ety anaty tambajotra.
Niteraka fanehoankevitra mivaivay avy amin'ireo mpanao gazety toa azy ny lahatsoratr'i Rtoa Moursaliéva. Ho azy ireo, Vao mainka hanaratsy ny toedraharaha ny fanarahamaso hentitra atao amin'ireo adolantsento. Tamin'ny Desambra, namoaka torolàlana ho an'ireo ray aman-dreny ny kaomity mpanadihady tao amin'ny faritr'i Irkoutsk, torolàlana izay namerina naka ireo hevitra sasany avy amin'ny lahatsoratr'i Rtoa Moursaliéva.
Nanomboka ny Jona 2016, sahirana mafy tokoa ny GPS raha vantany vao manakaiky an'i Kremlin. Marihan-dry zareo ho «seranam-piaramanindina Vnoukovo» i Kremlin, na dia misy 37 km aza ny elanelana misy amin'ireo toerana roa ireo. Nalaky takatr'ireo mpampiasa aterineto ny anton'io hadisoana io : ny FSO (sampan-draharaha federaly misahana ny fiarovana ny Federasionan'i Rosia) no manao izay hanelingelenana ny fiasan'ireo fitaovana rehetra mampiasa GPS. Izany no nataony dia mba hisakanana ireo ‘drones’ tsy handeha hisidina eny akaikin'i Kremlin (fanazavana iray hafa tsy maharesy lahatra no milaza fa misy ifandraisany amin'ny resaka fanafihana aminà ‘roquette’ atao amin'i Kremlin sy ny ady lehibe fahatelo ilay izy). Tezitra mafy amin'io fepetra io ireo Maoskovita, fepetra niteraka fidanganan'ny saran'ny fiarakaretsaka, torolàlana diso ho an'ireo fitaovana sasany fampiasa ara-panatanjahantena, ary, ny tena ratsy indrindra, nanakana an-dry zareo tsy hihaza Pokémon.
Ny valala ao Biriouliovo (faritra ivelan'i Maosko)
Ohatra velona amin'ny fifandirana ao an-toerana ity fomba fiteny ity, fifandirana izay mihanaka toy ny vanja mipoaka ety anaty tambajotra sosialy. Tamin'ny 2016, lasa fizoran'ny mpandeha an-tongotra ny Kamorin'ny Zokiolona, faritra fonenana iray napetraka ao afovoan'i Maosko. Voasariky ry zareo “Patriki” (fomba fiantso azy ireo mahazatra) hatrany ny olona avy amin'ny sarangam-piarahamonina rehetra , tafiditra ao anatin'ireny ireo «faikan'olona», izay marobe tokoa tamin'ity taona ity. Nanapaka hevitra ny tsy hangiana ireo mponina eny amorony: nofenoin-dry zareo lahatsoratra momba ireo “valala ao Biriouliovo” ny Facebook sy ireo gazety maoskovita, eto ny valala dia entina milaza ireo mponina amin'ny tanàna tsizarizary ao Maosko. Na eo aza ireo tebaka ao amin'ny Twitter sy Facebook, nahazo olona ihany ry zareo ary azo ambara ho nahatratra ny tanjony. Manomboka izao dia tsy maintsy akatona amin'ny 11 ora alina ireo magazay sy trano fisotroana an'ireo Patriki, ary tsy misy azon'ireo “valala” atao intsony afa-tsy ny mandeha mody any Biriouliovo.
Monetotchka dia iray tamin'ireo fahataitairana tao amin'ny aterineto tao Rosia tany am-piandohan'ny 2016 . Lisa, izay milalao ao ambadiky ny solonanarana Monetotchka, dia mpianatra tao amin'ny lisea Ekaterinenbourg. Antsa fanaony ireo hira madinika feno ny fanahin'ny filatroana, ny kolontsain'ny tranonkala, ny politika ary ireo nàmany ao an-tsekoly. Tato  ny iray amin'ireo lahatsariny momba ny fiainana “an-tambajotra” ho an'ny ankizivavy rosiàna iray mpianatry ny lisea, saingy tapaka ny rohy:
Monetotchka – Liza Aho
Amin'izao fotoana izao dia ao Maosko i Liza no monina ary mianatra ao amin'ilay sekoly malaza VGIK [ivontoerana nasionaly fianarana momba ny sarimihetsika]. Manohy miakatra an-tsehatra aminà lanonan-takariva vitsivitsy ihany izy, saingy nangatsiatsiaka ny fisehoana anaty media – hatreto aloha.
LSDUZ sy IFYaU9
Ireo fifangaroana roa tsy hay vakiana ireo dia nanana ny ora namirapiràtany nanomboka tamin'ny nahitan ‘i Alexeï Navalny azy ireo tany anaty rejisitry ny Rosreestr (Sampandraharaha federaly ao amin'ny firenena misahana ny fandraketana, ny kadasitra ary ny fanaovana sarintany). Voamarik'i Navalny fa lasa LSDUZ sy IFYaU9 ny anaran'ireo tomponà hotely raitra tsy miankina sasantsasany, izay tany aloha dia an'ny zanakalahin'ilay lehiben'ny fampanoavana Iouri Tchaïka . Ny tanjona, hoy izy, dia hanafenana ireo torohay tsiambaratelo momba an'i Artiom sy Igor Tchaïka. Nampahatsiahivin'i Navalny ihany koa ho an'ireo mpamaky azy fa nanjavona to anatin'ilay rejisitra Rosreetr ny torohay momba ireo fanànana an'ny fianakavian'ireo olom-panjakana mitàna toerana ambony .
Niteraka aingam-panahy ho an'ireo mpamaky ilay bilaogy malazan'i Navalny ity toedraharaha ity ka nahatonga fiforonana tantara an-tsary sy fanambatambarana sary mampihomehy, ary dia nampanao lalao mihitsy aza ny tranonkala tsy miankina «Meduza», ao Litoania, lalao ahafahana mahafantatra izay mety ho fanoratra ny anaranao raha ao anaty rejistra Rosreestr.
“Iza no anaran'ny zanakao lahy ?” – “LSDUZ, IFYaU9.”
Any amin'ny aty lalin'ny Fampanoavana ao amin'ny Federasionan'i Rosia any.
Loharano: tranonkala samihafa tao amin'ny tambajotra sosialy.
Efa nahatsinjo mialoha sahady ireo «tenin'ny taona 2016», nosintoniny avy tao amin'ny lisitra an'ny Dojd ny «RuNet Echo» :
Rusiano (Русиано), Viper (Вейпер) ary «tsy msy vola [ho anareo], famahereza» (Денег нет, но вы держитесь)  [angl]
Manana Anarana Mahatsikaiky Ny SArim-Biby Famantarana Ny Mondialy 2018 Ao Rosia Ary Tsy Azonao Akory Aza Izany (Забивака)  [Malagasy]
Manana Fahavalo Matanjaka Ilay Tsy Mpino An'Andriamanitra Nilalao Pokemon-Go Tany Am-piangonana Tao Rosia  [Malagasy]
#TsyMatahotraAhoNyHilazaIzany (#ЯНеБоюсьСказать)  [Malagasy]
Tafiditra Anaty Tantara Ratsy Saro-bahàna Ireo Mpiandraikitra Ny Zon'ny Ankizy Ao Rosia? (Как поплавали?)  [Malagasy]
Réseaux de neurones (Нейросети)  [ Malagasy]
En louboutins (На лабутенах)  [frantsay]
Télégonie (Milaza izy fa mahatadidy zavatra ny selan'ny tranonjaza) (Телегония)  [Malagasy]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/09/132946/
 Rusiano (Русиано), Viper (Вейпер) ary «tsy msy vola [ho anareo], famahereza» (Денег нет, но вы держитесь): https://globalvoices.org/2016/12/27/russias-top-ten-memes-in-2016/
 Manana Anarana Mahatsikaiky Ny SArim-Biby Famantarana Ny Mondialy 2018 Ao Rosia Ary Tsy Azonao Akory Aza Izany (Забивака): https://mg.globalvoices.org/2016/10/29/90817/
 Manana Fahavalo Matanjaka Ilay Tsy Mpino An'Andriamanitra Nilalao Pokemon-Go Tany Am-piangonana Tao Rosia: https://mg.globalvoices.org/2016/09/09/88140/
 #TsyMatahotraAhoNyHilazaIzany (#ЯНеБоюсьСказать): https://mg.globalvoices.org/2016/07/07/84987/
 Tafiditra Anaty Tantara Ratsy Saro-bahàna Ireo Mpiandraikitra Ny Zon'ny Ankizy Ao Rosia? (Как поплавали?): https://mg.globalvoices.org/2016/07/02/84785/
 Réseaux de neurones (Нейросети): https://fr.globalvoices.org/2016/04/02/196664/
 En louboutins (На лабутенах): https://fr.globalvoices.org/2016/07/07/199479/
 Télégonie (Milaza izy fa mahatadidy zavatra ny selan'ny tranonjaza) (Телегония): https://globalvoices.org/2016/09/09/she-says-uterine-cells-can-remember-meet-russias-new-childrens-rights-commissioner/